सुनको मूल्य दुई दिनमा ८ सय रुपैयाँले घट्यो, कतिमा हुँदै छ कारोबार ? « Artha Path
सुनको मूल्य दुई दिनमा ८ सय रुपैयाँले घट्यो, कतिमा हुँदै छ कारोबार ?
काठमाडौं । बिहीबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ५ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ८९ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । त्यस्तै, बिहीबार तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा ५ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ८८ हजार ८५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । त्यस्तै, बिहीबार चादीको मूल्य तोलामा १० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १३ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
बुधबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ३ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ८९ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार थियो । त्यस्तै, बुधबार तेजावी सुनको मूल्य तोलामा ३ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ८९ हजार ३५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, बुधबार चाँदी तोलामा १५ रुपैयाँ घटेर प्रतितोला १३ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य ११ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ९० हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, मंगलबार तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ८९ हजार ६५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, मंगलबार चाँदीको मूल्य तोलामा २५ रुपैयाँले बढेर तोलामा १३ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
सोमबार छापावाल सुनको मूल्य स्थिर रहेर ८९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, तेजावी सुनको मूल्य पनि स्थिर रहेर ८८ हजार ५५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य भने ५ रुपैयाँले बढेर १३ सय ३५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।